Daawo sawiradda Dagaalkii runilgood iyo xasuuqii Ciidamada dowladda – Biyacade
May 6, 2016 August 29, 2016 biyacade
Daawo sawiradda Dagaalkii runilgood iyo xasuuqii Ciidamada dowladda
Dagaal xoogan oo ay soo qaadeen alshabaab ayaa si xeeladeyaan ku xasuuqay alshabaab oo leh khubaru dhinaca dagaalka gaadmada loo yaqaanno.
Sida lawada ogyahay ciidamada dowladda ayaa dib ugurasho gala goorya dagaal dhab ah soo food saaro.
Alshabaab ayaa dagaalka ku bilaabay qaab aan laga filaneeyn ayagoo soo diray afar asgari kuwaasoo weeraray dhanka difaaca ciidamada dowlada.
Ciidamada dowlada ayaa vaqdan halka alshabaab uu wadada u galay ciidamadii baqdinta galay sidaana lagu xasuuqay ciidamadii oo kala garan waayay halka dagaalka ka socdo.
Asgarta dowlada ayaa si ugaarsasha loogu laayay hareeraha magaalada.
Halkaan ka daawo aawiradda.
Waaciidamii la xasuuqay ee Runil-good
Waa asgartii dowlada ee dagaalkii runil-good.
Previous NINKEEYGA AYAAN KA CABSADAA WAANA JECELAHAY!